Ukubuyela kwiiNgcebiso zeSikolo saBafundi beZikolo eziPhakamileyo - Ulutsha Nesikolo
Ukubuyela kwiiNgcebiso zeSikolo saBafundi beZikolo eziPhakamileyo
Ukuqala kwesikolo ekwindla kuthetha izinto ezininzi-ukuqala komsebenzi wesikolo, iiklasi ezintsha, ukwenza abahlobo kunye nokulawula ixesha lakho. Nokuba uyi-upperclassman okanye umntu omtsha, ukuba nemini kunye neshedyuli yakho ziqhutywa kakuhle kuya kuqinisekisa unyaka ophumeleleyo wesikolo kunye noxinzelelo oluncinci.
Iingcebiso ezilishumi zoNyaka oMkhulu
Sukucinga nje ukuba unyaka omkhulu uza kuwela ethangeni lakho. Kuya kufuneka usebenze ukuze yenzeke. Nokuba sele ulungelelaniswe ngokugqibeleleyo okanye uyathanda ukubambezela kude kube ngumzuzu wokugqibela-ixesha lokucwangcisa kwangaphambili ngaphambi kokuqala kwesikolo. Sebenzisa izicwangciso ezithile zokukunceda ukuba ungahlali nje udada ngexesha lonyaka wesikolo, kodwa uphumelele ngokwenene.
Fumana Ukuphumla Okuninzi
Ukuba nexesha elaneleyo lokulala kubalulekile kwimisebenzi yesikolo esiphakamileyo. Abafundi abahlala belele ngaphantsi kweeyure ezisibhozo ngobusuku banokungavuki okanye baphaphe emini. Ukongeza emsebenzini wesikolo, ukuba ucwangcisa ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yasemva kwesikolo okanye kwimidlalo, kuyakufuneka uphumle ukuze wenze okusemandleni akho.
Yitya isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini
Ngalo lonke ixesha qala iintsuku zakho zesikolo uphumle ngesidlo sakusasa esempilweni ukuze ufumane usuku kude kube sasemini. Ukuba awunguye umntu odla isidlo sakusasa esikhulu, ke cinga ngokutya ibha yeproteyini okanye i-smoothie ukunqanda indlala. Ukuba uhlala utya kamva ekuseni, unokufuna ukuphatha into encinci yokutya ukuze ungene phakathi kweeklasi ngaphambi kwesidlo sasemini. Ukuba awuyithandi isidlo sasemini sesikolo, ungapakisha isidlo sasemini xa usiya esikolweni. Ngale ndlela uneentlobo zokutya ezikuthandayo.
Gcina ilokhari yakho icwangcisiwe
Kukho iintlobo ezininzi zeenkqubo zentlangano ezikhoyo. Khetha inkqubo yeeshelfu ekuvumela ukuba ugcine iincwadi zakho kunye neefolda kwindawo emileyo. Oku kuya kuba luncedo ngakumbi xa ungxamele kwilokhari yakho phakathi kweeklasi. Ukongeza, xhoma ibhodi yokususa eyomileyo, eyomileyo emnyango wangaphakathi ukukunceda ugcine umkhondo kuluhlu lwezinto oza kuzenza zosuku.
Hlela iiKlasi ngeeBinders
Thenga izibophelelo ezinemibala enokusetyenziselwa iklasi nganye. Oku akuyi kunceda kuphela xa ujonge ilokhari yakho yodidi oluthile, kodwa unokugcina onke amanqaku eklasi kwindawo enye ngaphandle kokuwaxuba kwelinye iklasi. Khetha izibophelelo ngomkhono ocacileyo wangaphambili ovumela ukuba ubonise ikhalenda yeklasi yeklasi.
ukuba uzothini kumntu otshatayo
Akukho sizathu sokuba neentloni ngabantu abatsha. Nokuba ubuyela kwisikolo samabanga aphakamileyo, okanye umtsha, thetha nabantu abakungqongileyo. Jonga ngasekhohlo nasekunene, kwaye udibane nabantu ngapha nangapha kwelokhari-baya kuba lapho unyaka wonke. Ukongeza ekwenzeni izihlobo, ukuthetha nabantu kunokukunceda emsebenzini weklasi kwaye uzame imidlalo.
Jonga uluhlu lwemidlalo yasemva kwesikolo kunye neeklabhu ezikhoyo kuwe. Khetha into onomdla kuyo, kwaye ujoyine iqela. Oku akubonakali kulungile kwikholeji yakho kuphela, kodwa yindlela efanelekileyo yokudibana nabantu, usebenzise ingqondo yakho okanye umzimba kwaye ubonise umoya wakho wesikolo.
I-Newbies kufuneka ihlale ihlala kwisikolo. Nokuba abafundi abaya kwiminyaka yabo yobudala baya kufuna ukuya kwi-orientation. Yindlela elungileyo yokuhlangana nabafundi, ootitshala kwaye uve ukuba kuqhubeka ntoni na ngeklasi.
Sukungena kumqolo ongasemva weklasi kuba uya kubizwa ngaphezulu, kwaye usenokungayiva yonke into ethethwa ngutitshala. Gcina kufutshane ngaphambili okanye embindini, ngaphandle kokuba ubabele izihlalo, ngamava amahle.
Yenza Indawo yoMsebenzi wasekhaya
Nikezela indawo ekhaya eyindawo yakho yesikolo echongiweyo. Lo mmandla kufuneka ungabikho mida kuye nakubani na ngaphandle kwakho ngexesha lomsebenzi wakho wesikolo. Khetha indawo engenaziphazamiso, njengetafile esegumbini lakho okanye kwigumbi lokutyela, ukuze ukwazi ukugxila emsebenzini wesikolo.
yintoni injongo yosha
Lungiselela usuku olulandelayo
Beka iimpahla zakho, iincwadi kunyeezinye izintounokufuna ngolu suku lwesikolo lulandelayo. Ukuba upakisha isidlo sakho sasemini, cinga ukukwenza ngobusuku obungaphambi kokuba unciphise ukungxama kwasekuseni.
Ngaphambi koMhla wokuqala
Ngaphambi kokuphuma kusuku lokuqala lwesikolo, thatha ithutyana uphefumle. Iminyaka yakho yesikolo esiphakamileyo iya kudlula kwaye kungekudala uza kuya ekholejini. Thatha ixesha lokudibana nabantu abatsha, uthathe inxaxheba kwimisebenzi yesikolo kwaye ufunde nzima. Umnqweno omhle!
Ikampu Expert Interviews Usana Uzuko Isibonelelo Funding Malunga Pregnancy Ukukhulelwa Impilo Nokuzilolonga
loluphi ulwimi oluthethwa kwiquebec
yimalini ukubonelela ngesipho sokuthweswa isidanga kwikholeji 2020
Amagama enkuthazo kumntu oza kuqhawula umtshato
ungaxela njani ukuba inja yakho ikhulelwe ingakhange iye kugqirha wezilwanyana